အဆိုပါ cashless ပူးပေါင်းကြံစည်မှု - စကားချီး | Apg29
အဆိုပါ cashless ပူးပေါင်းကြံစည်မှု - စကားချီး
လေးကြီးမားသော "cashless Monsters" (Master Card, Visa, American Express နှင့် Diners ကလပ်) ကိုအနောက်ရဲ့ငွေပေးချေမှုတစ်ဦးကိုနှိမ်နင်းမြင်သာထင်သာရခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအနှုတ်လက္ခဏာဒါပေမယ့်လည်းဒီနောက်ကွယ်ကကြောင်းစီးပွားရေးစနစ်အကြောင်းမသာကိုယ်နှိုက်kontantlöshetenဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတွင်ငါသည် Apg29 အပေါ်ဤနေရာတွင် Serial "သာလျှင်ငွေ" ၏ Cashless ပူးပေါင်းကြံစည်မှုထုတ်ဝေရန်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစာအုပ်ကမျြးစာကိုနဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာအခြေပြုမည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမဲ့ဗြာဒိတျ 13 ဖော်ပြထားတယ်အဖြစ်ကထိန်းချုပ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အမြင်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်ဤကဲ့သို့သောအကြွေးကတ်များ cashless မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုနှင့် implants နဲ့အီလက်ထရောနစ်တက်တူးဆီသို့ဦးတည်တိုးတက်မှုအဖြစ် cashless ဖြစ်ရပ်ကုသ။ အဆိုပါအထောက်အထားများအဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်မှတဆင့်အီလက်ထရွန်းနစ်အနီးရှိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနာဂတ်ဒါအပေါ်အကြွေးကတ်များကားမောင်းသူရဲ့လိုင်စင်, နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ကတ်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမဟုတ်တဲ့ cashless application ကိုလည်း (ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနည်းပညာနှင့်အတူအနုတ်လက္ခဏာ မှလွဲ. ) ကိုအသုံးပြုသူအနာဂတျမှာသူ cashless ကြော့ကှငျးသို့ရရှိသွားတဲ့ကြောင်းကိုကြောင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိဆိုလိုသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ထိုစာအုပ်အီလက်ထရွန်းနစ်အနီးကိုယ်ခန္ဓာ၏ကျယ်ပြန့်ဘက်စုံအမြင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ Kontantlöshetenများသောအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့အစ်ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းဟုခေါ်သည်အရာကိုကျောရိုးဖြစ်ကြသည်။
လက်ရှိဘုံ cashless ငွေပေးချေမှုအကြွေးကတ်များဆဲလ်ဖုန်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ကိုဖြစ်စေနှင့်အတူလုပ်ဖို့အကြမ်းအားဖြင့်ကွဲပြားကြသည်။ မကြာခဏဤပေါင်းစပ်၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များကအင်တာနက်ဘဏ်များ, မိုဘိုင်းဘဏ်နှင့်တယ်လီဖုန်းဘဏ်များဖြစ်ကြသည်။ ဤအဘဏ်များ၏တိုးမြှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုငွေလျှော့ချရန်ဟုဆိုကာအဖြစ်ကိုယူ။ တောင်မှတခြားကြောင်းဖြေရှင်းkontantlöshetထက်ဤအခြေအနေတွင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ATM စက်များ, ငွေသား, ငွေသားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဘဏ်များနှင့်အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမငွေသား။ အရာအားလုံးအမည်ရအတူတကွမူတည်ပါသည်။ တစ်ဦးကရေရှည်လမ်းကြောင်းသစ် cashless option ကိုအားဖြင့်ပေးဆောင်ပမာဏကိုလျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရှုထော cashless အမှတ် မှစ. , အသေးစားငွေပေးချေမှုတစ်ခု Achilles ဖနောင့်ခဲ့။ တစ်ဦးချင်းစီ (peer-to-peer ငွေပေးချေမှု) အကြားငွေပေးချေလည်းမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်အတူ ပို. ပို. ဖြစ်ကြသည်။
ဒီမှာအလေးပေးအမေရိကန်နှင့်ဆွီဒင်အဖြစ်စာအုပ်ဖုံးလွှမ်းတော်တော်များများတခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင့်ကတ်များ '' အစွန်းရောက်အဆိုးမြင်အတွေးတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအားဖြည့်နေပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလနျ့စရာအလှနျကတ်များကြီးစိုးထားပါတယ်။ သူတို့နောက်ဆုံးတော့မဆိုအမေရိကန်ကဒ်ကုမ္ပဏီကြီးများကဖွင့်စားရသည့်အခါ (လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အနုတ်လက္ခဏာများမှာအရာ) ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပရှိအဆိုပါအမျိုးသားရေးခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည် ပို. ပင်ပျက်စီးမှုပါဘူး။ ဤသည်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းမှမွေးဖွားပေးသောနှင့်တစ်ခြေလှမ်းနီးကပ်လာတဲ့ cashless ငွေပေးချေမှုလက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ ကတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် Eurocard (ဆွီဒင်) နှင့် Mondex (ဗြိတိန်) နှစ်ဦးစလုံးကိုကိုက်စားသောကြောင့်, ဤတွင်, MasterCard ကိုအထူးအနေအထားရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါစာအုပ်သည်စာဖတ်သူအားအလွန်အကျွံဆိုနိုင်ပါတယ်စာသားတစ်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပင်ပန်းမဟုတ်ပေးရကဏ္ဍများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအရှည်နှင့်အကြောင်းအရာအပိုင်းပိုင်းသို့ခွဲခြားထားတယ်။ နှစ်ခုအဓိကအနီရောင်ဝါယာကြိုးများအကြားအဆိုပါစာအုပ်အခြားအရာများ။ အဆိုပါ cashless ဦးတည်ချက်ထိခိုက်သို့မဟုတ်ပါကခုခံကြောင်းအဓိကအားဖြင့်ဆွီဒင်နှင့်အမေရိကန်အတွက် cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်တပ်ဖွဲ့များသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ။ ဤဝေဖန်မှုများနှင့်အတူ cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ငွေသားအဘို့ငြင်းခုံဆန့်ကျင်ခုခံနှင့်အငြင်းအခုံများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုရောထွေးဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသားနှင့်အတူများစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာအဘယ်သူမျှမတတိယပါတီပါဝင်ပတ်သက်နေသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီလွတ်လွတ်လပ်လပ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲအချင်းချင်းပိုက်ဆံပေးနိုငျသညျ, traceable မဟုတ်အမည်မသိဝယ်ယူမှုခွင့်ပြုပါ။ လူအများစုဟာရိုးသားကြသည်။ သူတို့ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်လျှင်အဖြစ်ဒါပေမယ့် cashless တည်ထောင်ခြင်းလူတိုင်းဆကျဆံတယျ။
ပြည်နယ်နှင့်အာဏာပိုင်များ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံခြား cashless စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးသားအစိုးရငွေသားငွေကြေးအစားထိုးခွင့်ပြုသင့်သောအချက်သက်သက်သာကောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့လှသောအပေါင်းတို့နှင့်အစားအစာနှင့်စွမ်းအင်မှဘက်မှာအန္တရာယ်လုံးဝအပြင်ဘက်ဆွီဒင်၏ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြည့်ဖို့ရှိသည်မယ်လို့နှင့်၏တန်ခိုးကားထုတ်လုပ်နိုင်ငံများသို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်kontantlöshetကျန်းမာဖှံ့ဖွိုးတိုးတအဖြစ်မှားယွင်းစွာမြင်ကြတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒါကတည်ထောင်ခြင်းအများစုအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေပါတယ်။ ကတစ်ခုတည်းထုတ်လုပ်တိုင်းပြည်အကြောင်းလျှင်ပိုမိုဆိုးရွား။ ဆွီဒင်အခြေခံအားဖြင့်ရှိပြီးသားငွေပေးချေမှုစည်းကမ်းချက်များကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျွန်ခံရသည့်အခါဒါkontantlöshetရဲ့နှင့်စပ်လျဉ်း။ လမ်းကြောင်းသစ် globalizing အနေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော cashless တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှဖှယျအနာဂတျအတှကျနညျးလမျးဖြစ်လာပါသည်။
အဆိုပါအလွန်အကျွံကုန်ကြမ်းအငြင်းအခုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိဘဲအကြွေးကတ်များနှင့်kontantlöshetများအတွက်အများဆုံး hackneyed အငြင်းအခုံဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံဒီတစ်ခုမှားယွင်းသောအငြင်းပွားမှုများကို ထောက်. အကြွေးကဒ်များကို အသုံးပြု. မိမိအအနာဂတ်လွတ်လပ်မှုကိုယဇ်ပူဇော်ခြင်းအဖို့ပြင်ဆင်ထားသည်သူတွေကိုအစစ်အမှန်ဘဝနှင့်စဉ်းစားမရနဲ့အသိဉာဏ်တွေ့ဆုံရန်။ ဤစာအုပ် motargumenterar အစွမ်းထက်ကုန်ကြမ်းအငြင်းအခုံ။ Cashless option ကိုအမြဲကန့်သတ်အချိန်ဖြစ်ကောင်း မှလွဲ. စွဲချက်စှနျးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စင်ကြယ်သောစွန့်ပစ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့် "နှေးကွေးလုယက်မှု" ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာကိုယ်တိုင်ကဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသားမပါကြေးရှိပါတယ်။
ငွေသား, နည်းပညာပိုင်းအားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်မျှနည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံကျတ်နှင့်လုံခြုံအသံဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ cashless စနစ်များကိုအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ရှိပါသည်။ ငွေပိုလျှံမဖြစ်မနေဝင်ရောက်ဖို့
ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးအထူးသဖြင့်လူတစ်ဦး၏မီးခိုးရောင်ခြေအိတ်အတွင်းတတိယအံဆွဲထဲမှာတည်ရှိပါတယ်သူတို့အားခုနစ်ခုငါးရာပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ ယူ. ပိုမိုပေါ့ပါးတဲ့စီးကရက်သူတို့နှင့်အတူမီးရှို့ရမည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက်Kontantlöshetကုတင်။ ထိုသို့သောငွေသားနှင့်အတူဖြစ်ပျက်လို့မရပါဘူး။ ငွေသားတစ်ဦးဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးဖြစ်ပါတယ်။
ဤစာအုပ်တစ်ပဟေဠိသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမှာkontantlöshetenတစ်ဦး, သမိုင်းဆိုင်ရာပစ္စုပ္ပန်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအနာဂတ်အနက်ရောင်ရုပ်ပုံလွှာကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် mosaic တဖဲ့အဖြစ်ရည်ရွယ်ထားသည်။ အဘယ်သူမျှမ "အဖြူ" kontantlöshetရှိပါသည်။ အရာအားလုံးအနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ kontantlöshetens "တောက်ပတဲ့အနက်ရောင်ပစ္စည်းဥစ္စာ" ကိုပြသရန်ဒီနေရာကိုအသုံးပြုသောအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ဝီကီပီးဒီးယား, သတင်းစာဆောင်းပါးများ, teletext နဲ့အလွယ်တကူပင်ပိုမိုသိချင်သောသူတို့အဘို့ညွှန်းဆိုခြင်းမရှိဘဲတွေ့နိုင်ပါသည်သောအင်တာနက်ပေါ်ရှိအလွယ်တကူသတင်းအချက်အလက်ပါဝင်သည်။ အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာကိုစင်ကြယ်စာပေkontantlöshetဒံယလေသ Goldberg နှင့် Linus Lars Petersson ၏ကတ်များ၏အိမ်တော်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်ငွေသားနှင့်kontantlöshet၏ဆှေးနှေးခငွေသားအတွက်ကျဘက်ကိုဖို့အလွန်အမင်း skewed ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ခဲမရရှိနိုင်kontantlöshetနှင့်ငွေသားဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများပေမယ့်လူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရပ်ရွာကနေ။ ပညတ္တိကျမ်းတစ်ဦးတည်းသာတရားစွဲဆိုမှုခြမ်းနှင့်မျှမကာကွယ်ရေးရှိသည်မယ်လို့လျှင်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသင်္ဘောကျင်းများတွင်ငွေသားထိုင်တော်မူ၏။ ရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောကာကွယ်ရေးအဲဒီမှာဝမ်းနည်းနှင့်အသံတိတ်ရပ်နေသည်ကိုရှေ့နေရဲ့လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ မဆိုရှေ့နေမသို့သော်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုအတွက်အနည်းငယ်ရှေ့နေလည်းမရှိ။ သူဖြစ်ကောင်း Teskedsgumman ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်သူကြီးတွေနဲ့ရဲရင့်ကိုစားနိုင်အောင်ရဲ့ငယ်ရှေ့နေလွှတ်ပေးရန်ကြကုန်အံ့။ kontantlöshetဆန့်ကျင်ဆွီဒင်အတွက်ဆန္ဒပြပွဲများအားကြီးသောကြီးထွားကြပါစို့။
နောက်ထပ်နှိုင်းယှဉ်နျူကလီးယားစွမ်းအင်အပေါ်ဆန္ဒခံယူပွဲသာတစ်ခု option ကိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့တိုးချဲ့။ လူ့အဖွဲ့အစည်းပြီးသားနျူကလီးယားစွမ်းအင် (kontantlöshetenဖတ်ပါ) နောက်ဆုံးမှာရှိသမျှသည်အခြားသောစွမ်းအင်ကျော်ယူလိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကြောင့်ထို့အပြင်လူဦးရေပင် yes သို့မဟုတ် no ဤမဲပေးခွင့်ပြုခဲ့သည်မဟုတ်။ ပြည်သူ့ငွေသားနှင့်ပြောkontantlöshetဘာမျှ၏အမှု၌ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဆန္ဒခံယူပွဲဤကိစ္စတွင်အတွက်ထုံသောလိမ့်မည်။ သင်ကအာဏာရှင်စနစ် (စုစုပေါင်းkontantlöshet) စည်းကြပ်သို့မဟုတ်ဒီမိုကရေစီ (ငွေသား) ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မှမဲပေးနိုငျပါဘူး။ အာဏာရှင်စနစ်ရွေးချယ်ဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုသည်ကမ္ဘာ့ကွန်မြူနစ်စေခငျြတခဲ့ကြပြီနိုင်လျှင်။ ဒါဟာရစေရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်၎င်း၏လူဦးရေကကြိုဆိုခဲ့သည်တစ်ခုခုဖြစ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ သင်ကနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်များကိုအတင်းမပေးသင့်ပါတယ်။ အခုတော့ကိုယ်ကျင့်တရား။ သို့သော်အခါအမေရိကန်သည်ကမ္ဘာ့၏ကျန်အပေါ်လည်းအနည်းငယ်ဆန္ဒပြသူတွေသော cashless နှင့်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်စည်းကြပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ဒါဟာကမ္ဘာကြီးကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏အင်အားသုံးဖို့အားလုံးကိုမှာအဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Kontantlöshetenသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာပလပ်စတစ်ကဒ်ရှိခြင်းအကြောင်းကိုတကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့် ပို. Insidious နှင့်လေးနက်တဲ့အရာဖွစျသညျ။ ထို့အပြင်အမေရိကန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သည့်အလားတူဥပမာမပါဘဲ genomruttne ရှငျဘုရငျသkontantlöshetens။
ဘဏ်များöversittaraktigaသဘောထားကိုကြောင့်ကရက်ဒစ်ကတ်များကိုစတင်သုံးစွဲဖို့ရငျ့ကကျြနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွင့်ကြောင်းမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသားအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကောင်းသောမသိသောသူအသေးစားမွေးကင်းစအဖြစ်ပုံဖော်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘဏ်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှု၌သူတို့ကိုတှငျရငျ့မှညျ့နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထိုခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ကိုက်ညီသော potty, သုံးနိုင်ပါသည်။ အဲဒါကိုခုခံ၏ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းနှင့်အကြွေးဝယ်ကတ်များသုံးစွဲဖို့ငြင်းဆန်ကြောင်းအစားအချက်အလက်နဲ့ဘုံသဘောမျိုးပြသ။ ဒါဟာဘဏ်များ '' လောဘနှင့်လောဘအကြောင်းကိုမဟုတ်ဘဲတပြင်လုံးကိုအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စုဆောင်းအခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ကန့်သတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူလုံလောက်ပါတယ်။
တောင်မှအလွန်ငယ်ရွယ်ကလေးများရွေးချယ်မှုရှိသည်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အစာအာဟာရကိုပူဇော်သောအခါ, အစာစားသို့မဟုတ်မလိုသောရှိမရှိကိုမိမိတို့အဘို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဘောလုံးကိုသို့မဟုတ်ခလောက်နှင့်အတူဆော့ကစားချင်တယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဆွီဒင်လူကြီးများငွေသားရွေးချယ်ဖို့မအရှည်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ အဆိုပါတွန်းလှည်းအစားထွက်ကပ်အမွေးရှည်သောခြေထောက်များနဲ့အရွယ်ရောက်လူပဲ။ အဆိုပါkontantlöseမိဘပေါင်းစပ်ဓါးသွားပါဝင်သည်ဟုတစ် dangling ကစားစရာနှင့်အတူကစားခြင်းကိုစတင်ပါရန် "ကလေးက" ပေါ်တွင်သည်းခံခြင်းမပါဘဲစောင့်ဆိုင်း။ အဆိုပါသင်တုန်းဓါးသွားကရက်ဒစ်ကတ်များဖြစ်ကြသည်။
80 ရာစုမှ 50 ရာစုကနေကာလအတွင်းဆွီဒင်မသက်ဆိုင်ကအုပ်ချုပ်မယ့်လူမှုရေးဒီမိုကရေစီသို့မဟုတ်ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရဖြစ်ခဲ့သည်ရှိမရှိ၏နေဆဲဆွီဒင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်နေဆဲသက်သာချောင်ချိရေး, လုံခြုံရေး, ကြားနေရေးနှင့်လွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူ imbued ။ ထိုအခါအရာအားလုံးပိုဆိုးရဖို့စတင်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများထဲမှာအနည်းဆုံး, ပိုပိုပြီးမဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အဆိုပါဆိုးတပါးဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုလည်းမြဲမြံစွာသူတို့၏သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ အဆိုပါစီးပွားရေးကို ပို. ပို. cashless ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Riksbank ဟာပုဂ္ဂလိကပိုင်လမ်းကြောင်းသစ်ချီးကျူးထောပနာပေမယ်သာ Panaxia အရှုပ်တော်ပုံနှင့်ရဟတ်ယာဉ်လုယက်မှုများကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခဲ့သည်။ ဘဏ်ပိုင်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုchockhöjdesများအတွက်ဝန်ဆောင်ခ။ ဒါကြောင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်တိုး 1200 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့သည်။ ဘဏ်စျေးကြီးအပေါ်ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်တိုင်ကြားဆက်လက်
စီမံခန့်ခွဲမှုသူတို့ကိုယ်တိုင်အကြီးအကျယ်အပြစ်တင်ကြသော်လည်း။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကိုလည်းကြောက်လန့်အရှိန်အဟုန်အတွက် cashless ဘဏ်အကိုင်းအခက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တကယ်တော့စီးပွားရေး, toppings အားဖြင့်သာစားသုံးသူများကဒီပေးဆောင်ရသောအခါအဆိုပါကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဘဏ်များကိုဘယ်လိုစျေးကြီးငွေသားပေးချေမှုများကိုအကြောင်းကိုကျယ်ကျယ်လောင်လောင်မြည်တမ်းခြင်းနေကြသည်။
avgrundsdjupets အောက်ခြေ၏အစွန်းမဟာမိတ်အစိုးရထဲမှာရောက်ရှိခဲ့သည်။ ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုပုဂ္ဂလိကပိုင်၏ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာလုံးဝနီးပါးကိုသတ်ကြ၏။ ကတည်းကဆွီဒင်ဖြည်းဖြည်းဆင်းစုစုပေါင်း cashless ဘေးအန္တရာယ်ဆီသို့ဦးတည်အောက်ခြေရွှံ့ထဲမှာလျှောဆက်လက်သိရသည်။ မဟာမိတ်အစိုးရသာငွေသားသံသရာနှင့်မထိုကဲ့သို့သောသိုက်လူတွေကို၏လက်ျာကုသနှင့်ဘဏ်ထဲမှာပိုက်ဆံရုပ်သိမ်းပေးရန်တစ်ခုအောက်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ငွေသားနှင့်ကတ်များအကြားတချို့ကရေရှည်ရွေးချယ်မှုခွင့်ပြုခံရဖို့မထင်ထားဘူး။
နောက်ဆက်တွဲအနီရောင်အစိမ်းရောင်အစိုးရခြုံငုံkontantlöshetများ၏ဝေဖန်မှုများ၏အဓိကကိုယ်စားလှယ်တဦးအနေဖြင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖို့အားလုံးကိုတူညီတဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ အားလုံးစိတ်ဝင်စားပါတီများဤဖိတ်ကြားချက်အားဖြင့်ဆွေးနွေးတင်ပြတစ်ဦးကဝန်ကြီး။ ဤအချိန်ပင်kontantlöskritiskaကိုယ်စားလှယ်များထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူရှိဖို့နဲ့ဆွီဒင်၏တပြင်လုံးကိုအသကျရှငျရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစငွေသား၏ riksdagssak ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ငွေသားရေးမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကျန်းမာသန်စွမ်း turnaround ကံမကောင်းသိလို့မရပါ။ သူသည်ပြည်နယ်ငွေသားအဘို့တာဝန်ပြန်ယူရမယ်ရေးသားခဲ့သည်တဲ့အခါမှာစုစုပေါင်းkontantlöshetကိုဦးတည်လာမယ့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဝေဖန်ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။
အချို့လေ့လာမှုများအဖြစ်အများအပြားတစ်ဆယ်ကလူထဲကရှစ်အဖြစ်ငွေသားစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားကိုတိုးပွါးစေချင်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဘဏ်ယုတ္တိမတန် Protect ဖောက်သည်နီးပါးထိုအရပ်၌သူတို့ကိုရှိသည်ဖို့ရဖို့တောင်းစား, အလှည့်၌, ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ငွေဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ဆိုကြသည်။ ပြည်သူ့အဘယ်သူမျှမလမ်းရှိပါလိမ့်မယ်လုံးဝငွေသားစနစ်အသတ်ထဲကနေ cashless တည်ထောင်ခြင်းတားဆီး။ cashless တည်ထောင်ခြင်းနှင့်အတူအဓိက Riksbank သုံးခုကိုအဓိကဘဏ်များ, ကဒ်ကုမ္ပဏီများနှင့်နိုင်ငံရေး, စီးပွားရေးနှင့်မီဒီယာများ၏အလွန်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုဆိုလိုသညျ။ ထို့အပြင်အချို့ဟောင်းတဦးပေါ့ပ်ရုပ်တုကို။ မုသာစကားများ၏အကူအညီနှင့်အတူ, ဝက်မုသာစကားနှင့်အပုံကြီးချဲတစ်ဦးစီးနင်းများအတွက်ဆွီဒင်ကလူကိုဦးဆောင်ကြပါပြီ။ သူတို့ကိုနောက်တခြားအရာအကြား၎င်း၏ကြီးမားသောဘဏ်နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများနှင့်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးကမ္ဘာကြီးကို။
လေးကြီးမားသော "cashless Monsters" (Master Card, Visa, American Express နှင့် Diners ကလပ်) ကိုအနောက်ရဲ့ငွေပေးချေမှုတစ်ဦးကိုနှိမ်နင်းမြင်သာထင်သာရခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအနှုတ်လက္ခဏာဒါပေမယ့်လည်းဒီနောက်ကွယ်ကကြောင်းစီးပွားရေးစနစ်အကြောင်းမသာကိုယ်နှိုက်kontantlöshetenဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောလူမှုရေးစနစ်များနှင့်နိုင်ငံအများအပြားမှာတော့စီးပွားရေးကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ amok ကို run ပါလိမ့်မယ်အပြုသဘောဆောင်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုအဖြစ်ကကြည့်ရှုပါ။ ဒါဟာကျန်းမာတဲ့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကရှုမြင်သည်။ ဤသည်မဟုတ်ဘဲဒီတော့ခက်သူတို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်သေမင်း၏ချောက်ကမ်းပါးပေါ်ဟာလည်းယိမ်းထိုးလှုပ်ရှားတချို့အနုပညာရှင် junkie နှိုင်းယှဉ်ရပါမည်။
အဆိုပါစာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီအကြောင်းကိုမဟုတ်ပေမယ့်။ သင်တို့သည်ဤသီအိုရီအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့တိုးတက်စေလိုလျှင်အခြားနေရာများတွင်အချက်အလက်များ၏မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဤစာအုပ်ကိုရည်မှန်းချက်ကြောင်းပြောမုသားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမြင့်မားပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာkontantlöshetenအနှစ်သာရသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးနာဘဏ္ဍာရေးစနစ်ဆန့်ကျင်ရုန်းကန်များအတွက်အားကြီးသောခေါ်ဆိုမှုအဖြစ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကဒီမှာနေတဲ့ကျယ်ပြန့်သက်သေအထောက်အထားအခြေစိုက်စခန်းထဲမှာရာအရပျ၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာအခြေခံကျကျအနုတ်လက္ခဏာကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ကြိုးစားမှား၏။ ဤစာအုပ်သည်နောက်ဆုံးကောက်ရိုးဖမ်းပြီးရန်တောင်းဆိုမှုသည်။
စာအုပ်ဖြစ်လာသည်ဟုအများအပြားအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်ကုလားအုပ်ရဲ့နောက်ကျောကိုဖဲ့သောအကြီးမားဆုံးအကြောင်းရင်းနှင့်ကောက်ရိုးဘဏ်တွေအများစုမရှိတော့ဘဏ်ထဲမှာငွေသားခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့် cashless ခဲ့ကြသည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘဏ်များ၏အများစုနေဆဲဘဏ်ထဲမှာပိုက်ဆံထုတ်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဤစာအုပ်ဖြစ်လာပါဘူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာစာအုပ်ရေးသားဖို့ပျော်စရာများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့အရေးအသားအဘို့အခြားအကြီးအစေ့ဆော်မှုကိုလည်းရခွေုံနှင့်ရိုးရှင်းတဲ့ cashless ကွင်း၏အပြုအမူအပေါ်အမျက်ဒေါသနှင့်စိတ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရေးသားသူအကြောင်းကြားခံရဖို့ဆန္ဒရှိသော်လည်းနှင့်များစွာသောအငြင်းပွားမှုများဆွီဒင်kontantlöshetတစ်ခုပြိုလဲဆုံးရှုံးမှုခုခံလာအောင်နှိုးဆွ။
ငွေကနေ cashless ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဒါမယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်စွာတတ်၏။ တစ်ခုသာစာအုပ်၏လုပျငနျးရဲ့အဆုံးမှာ, အရေးကြီးသောအရာများကိုစာအုပ်အတူပါလာမဖြစ်ပျက်။ စာရေးသူကဤစာအုပ်ကိုထံသို့အချို့သောအရေးကြီးသောအရာများကိုအကြောင်းကိုနောင်တ။ သို့သော်တဦးတည်းလည်းသင့်လျော်သောအချိန်တွင်ရေးသားခြင်းကိုရပ်တန့်ရပေမည်။ ဘယ်လိုပျော်စရာကဆုချီးတတ်နိုင်သမျှကြောင်းအဖြစ်အများအပြားရည်ရွယ်ချက်မှာဖတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, စာအုပ်ရေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုသမိုင်းမှာမကြုံစဖူးအဆိုးဆုံးလူမှုရေးရောဂါKontantlösheten။ အတွေးအခေါ်ရှင်အန်နှင့်အတူအပြည့်အဝချိတ်ဆက်, ချွဲ, ပြည်, အနီရောင်မျက်လုံးနှင့်ပြည်တွင်းရေးသွေးထွက်အနာဆိုး။ kontantlöshetပျံ့နှံ့ချင်သူကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်လူအနှုတ်၌တကယ့်ကြီးမြတ်အစိုးရအခြေပြုအတူတကွဆောင်တတ်၏, ပြီးတော့မျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်တစ်ခု Virus ကူးစက်ထားခြင်းမရှိတဲ့တံတွေးထွေးခြင်းနှင့်ဖမ်းဆုပ်ခြင်းကြောင့်ဘေးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အကူအညီများ၏ပေမယ့်တံတွေးထွေးဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခံရဖို့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့kontantlöseစောင့်တောင်းပန်မယ့်အစား။ "ကြယ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အဖြစ်" သူတို့ကတောင်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းမှကြိုးစားရန်ကြိုးရဲ့အထင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြင်ရkontantlöshetသူကယ့်ကိုအပျက်သဘောတောင်မှလူတွေ။ ဤစာအုပ်ကြောင့်နှင့် cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်သင့်တယ်နိုင်သည်ကိုပြသနိုင်ဖို့လိုသည်။
အဆိုပါစာအုပ် 2015/16 ၏အလှည့်မှာအပြီးသတ်ခဲ့သည်။ တစ်နေရာရာမှာဆွီဒင်အတွက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် Written ။ အဆိုပါစာအုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုလူကြီးများအတွက်ဘဝန့အားလုံးဆွီဒင်ကလေးများထံအပ်နှံသည်။ ဒါဟာဖတ်ရှုဖို့, ဒါပေမဲ့သူတို့တတ်နိုင်သမျှရှည်လျားအခမဲ့လူတွေကိုအဖြစ်အနာဂတ်ရှိသည်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့သားသမီးတို့အဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။